वित्त मन्त्रालय, भारत
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग पेग भएको परिस्थितिमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा हाल नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुँदै गएको छ । भारतीय रुपैयाँको गिरावटलाई नजिकबाट नियालिरहेका सञ्जीव सन्याल भारतको वित्त मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । भारतीय इतिहास तथा अर्थतन्त्रमाथि उनले चारवटा पुस्तक लेखेका छन् । डच बैंकका पूर्व अर्थशास्त्री सन्याल भारतीय अर्थनीति निर्माणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहँदै आएका छन् । रोड्स स्कलर तथा आइसनहावर फेलो सन्याल वल्र्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा २०१० को विश्वको युवा नेतृत्वका रूपमा पनि छनोटमा परेका थिए । एसियाकै एक प्रमुख अर्थशास्त्री मानिएका सन्यालले ‘इकोनोमिक टाइम्स’ सँगको कुराकानीमा अमेरिकी डलरसँग भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरमा आएको गिरावटका बारेमा विश्लेषण गरेका छन् । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा झैं भारतमा पनि वित्तीय तथा चालु खाता घाटामा जानसक्ने आँकलन गरिएको छ । भारतीय आर्थिक वृद्धि, रुपैयाँमा आएको गिरावट, भारतमा हाल भइरहेको बैंक मर्जर, विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन गैरआवासीय भारतीयहरूका लागि विशेष निक्षेपको योजनालगायतका विषयमा सन्यालसँग गरिएको कुराकानीको सार :
८.२ प्रतिशतको पछिल्लो जीडीपी वृद्धि ओरालो लाग्न सक्छ । केहीले यसलाई न्यून आधारको कारण भएको र दिगो नरहने बताएका छन् । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिलो त्रैमासिक अवधिमा हासिल भएको ८.२ प्रतिशतको पछिल्लो जीडीपी वृद्धि निश्चित रूपमा पनि बलियो हो । यसलाई जीएसटीले म्यानुफ्याक्चरिङमा आएको मन्दीका कारण देखा परेको तथ्यांकीय आधारले केही सहयोग गरेको हुन सक्छ । यद्यपि, यदि यसलाई आधारदरमा मिलान गर्ने हो भने जीडीपीको दर ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि मात्रै हुन सक्थ्यो । यसले हामीलाई सहजै रूपमा विश्वकै तीव्र वृद्धिको अर्थतन्त्र बनाएको छ ।
वृद्धि बलियो भएको अवस्थामा पनि रुपैयाँमा आएको अवमूल्यनले वित्तीय र चालू खाता घाटाको त्रास देखिएको छ नि ?
रुपैयाँ र डलरको विनिमय दरका बारेमा तपाईंले केही कुराका बारेमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि तपार्इं दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने रुपैयाँ अत्यन्त स्थिर देखिएको छ, जुन हाम्रो समाजमा दुर्लभ मानिन्छ । हामीले हाल अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन भएको पाएका छौं । रुपैयाँ अधिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने धारण राम्रो होइन ।
हाम्रा व्यापार साझेदार चीनलगायतका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गरिरहेको अवस्थामा रुपैयाँ बलियो हुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न ।
यस्तै, अल्पकालीन अवधिमा देखा परेको अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न पनि आरबीआईको मध्यकालीन अवधिमा बजार समायोजनको लामो समयदेखिको नीति रहँदै आएको छ । यदि अमेरिकी डलरसँगको विनिमयमा अन्य प्रमुख मुद्राहरूको पनि अवमूल्यन भयो भने आरबीआईले पनि यसलाई स्वाभाविक रूपमा यसको अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले आरबीआईलाई बैंक मर्जरका प्रत्याशीहरूको परिचय दिनका लागि आग्रह गरिरहेको रिपोर्टहरू बाहिरिएका छन् । सरकारले के गर्ने इच्छा राखेको छ र यसले आगामी केही वर्षमा के गर्ने योजना बनाएको छ ?
मर्जर र सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको सबलीकरणको विषय आवधिक रूपमा आउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै संख्यामा साना बैंकहरू रहन असम्भव हो । मर्जरले साना बैंकहरूलाई नै लाभ हुने भएकाले यो आवश्यक भएको तर्क गर्न सकिन्छ, तर यहाँ केही महत्वपूर्ण कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले त मर्जर बैंकिङ समस्याका लागि पहिलो समाधानको विषय होइन ।
यसैगरी एनपीएको विषय विगतमा गरिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट उत्पन्न भएको खुला समस्या हो । हामीले यसमा नजर पुराउनु आवश्यक छ । मर्जर र सबलीकरणले प्रत्यक्ष रूपमा समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । जब सबलीकरण गरिन्छ यो गर्नुका व्यापारिक वा व्यवसायिक कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
हामी राम्रो बैंकसँग नराम्रा बैंकलाई मर्जर गर्न गइरहेका छैनौं । हामीले राम्रो अवस्थामा रहेका ठूला बैंकहरूलाई मर्जर गर्न गइरहेका छौं । हामीले कम गुणस्तरका बैंकलाई पनि सुुधार हुनका लागि मर्जरको प्रयास गरिरहेका छौं । मर्जरको कार्य कठोर रूपमा व्यावसायिक र व्यापारीकरणको आधारमा गरिनेछ । यो पनि एनपीएको समस्या समाधान भएपछि मात्रै हुनेछ ।
सरकार विमौद्रीकरणको पक्षमा रहे पनि मुद्रास्फीतिको पछिल्लो अवस्थाका कारण विमौद्रीकरणमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । यसमा सरकारले देखेको लाभका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ ?
विमौद्रीकरणलाई कालो धनविरुद्धको युद्धका रूपमा सरकारले हेरेको थियो । यो परिवेशमा तपाईंले विमौद्रीकरणलाई अन्य विभिन्न कदम मध्ये एक कदमको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमका अन्य कदमहरूमा फ्युगिटिभ इकोनोमिक अफेन्डर्स बिल, एन्टी बेनामी लेजिस्लेसन, रियल इस्टेट रेगुलेसन एक्ट, सार्वजनिक स्रोत साधनको पारदर्शी बिक्री, बैंकिङ क्लिन आदि रहेका छन् । त्यसैले यसका लागि ठूलो प्रयास भइरहेको छ र यसबाट पहिलनै लाभ मिल्न थालेको छ ।
वित्तमन्त्रीले बारम्बार उल्लेख गरेसँगै दर्ता भएका कर दाताको संख्यामा नाटकीय वृद्धि भएको छ । हामीले कर भुक्तानी राम्रो अवस्थामा भएको पाएका छौं । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने देशमा व्यावसायिक संस्कृतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । कुनै पनि तटस्थ अवलोकनकर्ताले यो आधारभूत सांस्कृतिक परिवर्तनलाई नकार्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
इक्विट बजार कीर्तिमानी रूपमा उच्च अवस्थामा छ । वास्तवमै केही प्रतिबद्धतापछि यो राम्रो अवस्थामा फर्किएको हो ?
इन्विटी बजार वास्तवमै उच्च भएको छ, तर एक नीति निर्माताको रूपमा मूल्यांकनका बारेमा टिप्पणी गर्ने अवस्थामा म छैन । तर हामी विनिवेशमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले हालसालै मात्र एयर इन्डियाका बारेमा केही प्रयास गरेका छौं ।
यसले काम त गरेन । तर हाम्रो प्रयास यथावतै छ । हामीले अगाडि बढ्ने चाहना राखेका छौं र विभिन्न तरिकाबाट विनिवेशलाई सञ्चालन गर्दैछौं ।
सरकारले आफुले स्थापना गरेका कम्पनीहरू लिने इच्छा त राख्दैन होला, तर आईटीसी, एल एन्ड टी र एक्सिस बैंकको स्वामित्वको हिसा लिनु पनि विवेकशील हुँदैन होला नि ?
निश्चित रूपमा हामीले सोच्न सक्ने विभिन्न विकल्प मध्येका एक विकल्प हुन सक्छन् । हाम्रो पहिलो इच्छा भनेको एयर इन्डिया बिक्री गर्नु थियो । यसका लागि ठूला प्रयास भएका छन् । तर, विभिन्न कारणले गर्दा यसले काम गर्न सकेन । यसले योजनाअनुसारको काम गर्न सकेको छैन । तर, हामी यसको निजीकरण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं ।
रुपैयाँको गिरावटसँगै गैरआवासीय भारतीयहरूका लागि अर्को विशेष निक्षेपको योजनाका बारेमा पनि चर्चा भएको छ । तपाईं यस विषयमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ?
रुपैयाँलाई दीर्घकालीन बजार मूल्य फेला पार्नका लागि अनुमति दिइनेछ । तर, कुनै पनि दिशातर्फ देखा परेको अस्थिरतालाई केन्द्रीय बैंकमा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय भारतीयहरूको (एनआरआई) ऋणपत्रमा चासो व्यक्त गरिएको अवस्थामा आवश्यक भएमा यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्ने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं, तर हालको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सञ्चिति पर्याप्त रहेको छ ।
धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पुँजी पलायनको अवस्थालाई रोक्नका लागि ब्याजदरमा उच्च वृद्धिको सहयोग लिइरहेका छन् । यदि भारतबाट पनि पुँजी पलायन भयो भने भारतले के गर्ने सम्भावना बढी छ ?
हामीसँग मौद्रिक नीतिको अवस्था छ, जसलाई विनिमय दरको लक्ष्य भन्दा पनि मुद्रास्फीतिका रूपमा हेरिएको छ । अवश्य पनि, विनिमर दरले मुद्रास्फीतिको दरमा प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्थामा मात्रै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी लिनेछ । अत्यन्त सामान्य अवस्थामा ब्याजदरलाई पहिलो प्रयोगका रूपमा रुपैयाँको रक्षाका लागि उतारिनेछैन, तर मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै प्रयोग गरिनेछ । मौद्रिक नीति समितिले पहिलो अधिकारको रूपमा मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिलाई प्रयोग गरेको छ र त्यो नै यसको पहिलो र प्रत्यक्ष अधिकार हो ।
भारतले इरानबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेलको आयात गरिरहेको अवस्थामा इरानमाथिको नाकाबन्दीको प्रभाव सम्हाल्न तपार्इं कत्तिको तयार हुनुहुन्छ ।
यो निश्चित रूपमा पनि हाम्रा लागि चासोको विषय हो ।
कच्चा तेलको आपूर्तिको मामिलामा इरान हाम्रो तेस्रो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
हाम्रा लागि यो मुलुक महत्वपूर्ण भू–रणनीतिक मुलुक पनि हो र हामीले चाबहार बन्दरगाहमा लगानी पनि गरेका छौं । यो विषयप्रति हाम्रो ध्यान पनि गएको छ र अमेरिकासँग हामीले कुरा पनि राखेका छौं । आशा गरौं, केही राम्रो समाधान निक्लनेछ ।